Home » Jobs » Employer Job Offer
Employer Job Offer, Wanted | kelvin070 | December 3, 2018
Social Media Evaluator, Myanmar
Employer Job Offer, Jobs | camalejo | September 10, 2018
Appen is looking for Burmese speakers in Myanmar for an online and part time job. Task: AsaSocial Media Evaluator you provide feedback on news feeds, adver...
သံစဉ်ပြုလုပ်သူ၊ ကိုယ်ပိုင်သီချင်းရေး ကိုယ်ပိုင်သီဆိုနိုင်သူများ နှင့် Carto...
Employer Job Offer, Jobs | psmyanmar | August 10, 2015
- Faith,Inc Co.,ltd သည် Smartphone Ringtone ၊ ကွန်ပျူတာ ၊ ဂိမ်းပစ္စည်းများ ၊ TV ၊ Network audio စသည့်တို့ကို ပြုလုပ်နေသော ဂျပန်ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါသည်။ - ၄င်းတို့၏...
Employer Job Offer, Jobs | Saw Yan Aung | July 26, 2015
-> အလုပ်မပျက် ကျောင်းမဖျက်ပဲ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအဖြစ် စီးပွားရှာနိုင်မည် -> မိမိဘ၀အတွက် နောက်ထပ်ဝင်ငွေတစ်လမ်း ထပ်တိုးလာမည် -> လူငယ်များအတွက် ကျောင်းတက...
All times are GMT 6.5. The time now is 10:43 am.